बलिउड र कलिउडमा चिनिएका कलाकार हुन्, सुनिल थापा । करिब ४० वर्षदेखि निरन्तर चलचित्र क्षेत्रमा क्रियाशील उनी अहिले पनि उत्तिकै व्यस्त छन् । उनलाई अझै पनि चलचित्रको अफर आइरहेकै छ । नेपाली दर्शकले राते काइलाका नामबाट चिन्ने उनै सुनिल थापासित हालै गरिएको छोटो गफगाफ :
भर्खरै चलचित्र ‘प्रेम गीत ३’ को छायांकन सकेर काठमाडौं फर्किएको छु । अहिले डबिङको काम भइरहेको छ । यसअघि चलचित्र ‘सम्झना बिर्सना’को पनि छायांकन भएको थियो, यसको पनि डविङ गर्नुपर्ने काम छ । साथै, एभरेष्ट फिल्म एकेडेमीमा पनि आवद्ध भएकाले धेरैजसो समय त्यतै बित्छ । अहिले एकेडेमीमा नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएको छ । विद्यार्थी भर्ना भइरहेका छन् । त्यतै बढी समय दिइरहेको छु ।
केहि समयअघि सलमान खान प्रोडक्सनको चलचित्र ‘क्वाथा’मा काम गर्ने समाचार आएको थियो । हो ?
हो । हिजो मात्रै मुम्बईबाट फोन आएको थियो । अहिले उक्त चलचित्रको स्क्रिप्ट लेखन सकिएको म्यासेज पाएको छु । सायद आगामी एक महिनापछि छायांकन सुरु हुनसक्ने सम्भावना छ । त्यसैले अफर आएका अन्य कुनैपनि चलचित्रमा साइन गर्न पाएको छैन ।
उक्त चलचित्रमा तपाई कुन भूमिकामा देखिन लाग्नुभएको हो ?
अहिले यो विषय खुलाउन मिल्दैन । तर, स्क्रिप्ट पढिसकेपछि मैले चित्त बुझाएको छु । ‘क्वाथा’बाटै बलिउड अभिनेत्री कैटरिना कैफकी बहिनी इसाबेल कैफले डेब्यु गर्न लागेकी हुनाले पनि यो चलचित्र निर्माणमा टिमले निकै मिहेनतका साथ काम गरिरहेको छ ।
नेपाली चलचित्रमा काम गरिराख्नुभएको छ, बलिउड ठिक कि नेपाल ?
नेपाली हुनुको नाताले नेपालको चलचित्र उद्योग विश्वभर पुगोस् भन्ने चाहाना स्वभाविकै हुन्छ । यद्यपि, नेपाली चलचित्रमा काम गर्नुअघि बलिउडमा काम गर्थे । बलिउड संसारकै ठूलो चलचित्र उद्योग हो, यो स्विकार्नुपर्छ । साथै, नेपाली चलचित्र उद्योगले पनि विस्तारै फड्को मारिरहेको छु । यस मानेमा हामी असाध्यै खुसी हुनुपर्नेछ ।
अहिलेसम्म कति चलचित्रमा काम गर्नुभयो होला, याद छ ?
३ सय भन्दा धेरै नेपाली चलचित्र पुगे । दुई दर्जनजति बलिउड र तलगु, भोजपुरी चलचित्र भए । हातमा एक दर्जनको हाराहारी चलचित्र छन् ।
तपाईंले अभिनय गरेका हिट बलिउड चलचित्र ?
साहिब बहादुर, मेरी कोम, एक दुजेके लिएलगायत नै हुन् । तर, अरु केही राम्रा स्क्रिप्टमा पनि काम हुँदैछ । मैले नेपालीमा धेरै, बलिउड थोरै काम गरेपनि बलिउडबाट अफर आउन रोकिएको छैन ।